Gorgor iyo Haramcad oo la geeyay Garoonka Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Gorgor iyo Haramcad oo la geeyay Garoonka Muqdisho
Waxay tallaabadan kusoo aadaysaa xili Garoonka ay ku sugan yihiin Axmed Madoobe iyo Deni, oo mucaarad ku ah Farmaajo.
MUQDISHO, Soomalaiya - Farmaajo ayaa saakay Ciidamo isagu jira Gorgor iyo Haramcad geeyay Garoonka diyaaradaha Muqdisho, maalin kadib markii taliska amniga uu ku wareejiyay taliyaha booliska G/Banaadir Saadaq Joon.
Illo ku dhaw NISA ayaa KON u xaqiijiyay Ciidamada maanta la geeyay Garoonka, kuwaasoo sidoo kale howlgallo baaritaanno ah ka sameeyay xaafadaha ku dhaw, iyadoo aan la ogeyn ujeedka uu Farmaajo ka damacsan yahay.
Garoonka qeyb kamid ah waxaa degan Madaxda Puntland iyo Jubbaland oo tan iyo todobaadkii lasoo dhaafay kawaday kulamo xiriir ah oo ay la qaadanayeen mucaaradka iyo diblomaasiyiinta beesha Caalamka ee ku howlan isku soo dhaweynta dhinacyada iska soo horjeeda si xal loogu helo khilaafka doorashadda.
Farmaajo ayaa Gorgor iyo Haramcad u adeegsada danihiisa siyaasadeed inuu ku fushado, wuxuuna ku weeraray dhowr jeer siyaasiyiin mucaarad ah, iyadoo ku afduubey doorashooyinkii Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed.
Ciidankan waxaa tababaray Turkiga, waxayna toos uga amar qaataan Farmaajo iyo Fahad Yaasin, iyadoo ragga hogaamiyaha ay yihiin xubno kasoo goostay kooxda argagaxisadda Al-Shabaab, sida taliyaha Haramcad Farxaan Qaroole.